बालबिबाह पिडित मोदि जि जनकपुरमा के बोल्लान् — News of The World
– पुष्पलाल पाण्डेबैशाख १९, २०७५
आफ्नो सत्तारोहणको ५ बर्षे कार्यकालको अन्तिम अन्तिम तिर भारतिय प्रधानमन्त्रि नरेन्द« दामोदर दास मोदिले नेपालको भ्रमण गर्ने भएका छन् । यस अघि दुई पटक नेपालको भ्रमण गरीसकेका मोदिको आसन्न भ्रमण तेश्र्रो भ्रमण हो । यस अघि संघिय राजधानि काठमाडौँ बाट भ्रमण तय गरेका मोदिले पछिल्लो भ्रमण नेपाल भारत सम्बन्धको सांस्कृतिक सेतु माता जानकिको माईति जनकपुर बाट गर्न थालेका छन् ।
मोदि किन नेपालमा ?
अघिल्ला प्रधानमन्त्रिहरुको तुलनामा मोदिले छिटो छिटो नेपाल भ्रमण तय गरेका छन् । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रि निर्वाचित भएपछि उनको यो तेश्र्रो नेपाल भ्रमण हो । उनले पहिलो भ्रमणमा नेपालको संसदलाई समेत सम्बोधन गरेर मित्रवत् व्यबहारको सन्देश दिएका थिए । दोश्र्रो भ्रमण सम्म आइपुग्दा मोदि नेपाली जनमानसको लागि ‘सेलिब्रेटि’ बन्न सफल भए ।
तर, उनको त्यो ‘देखावि’ धेरै दिन टिक्न सकेन । ‘छिमेकि प्रथम’ को उनको नारा नेपालि जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेर आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने र घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरीरहँदा एका एक पटाक्षेप भयो । एस. जय सङ्कर जस्ता व्रिटिस औपनिवेसिक विदेश नितिका अनुयायि अधिकारीलाई नेपाल पठाएर संविधान जारी गर्न नदिन मोदिले भरमग्दुर प्रयास गरे ।
जव नेपाली जनताले भारतीय दबाबलाई अबज्ञाा गर्दै आफ्नो संविधान आफैँ जारी गरे त्यसपछि मोदिले नेपालमा नाकाबन्दि समेत लगाए । मोदिको नाकाबन्दि भारतका लागि ‘आफू ताक्ने मुढो, मुढो ताक्छ घुँडो’ समेत भएपछि बाध्य भएर फिर्ता लिनु पर्यो ।
यसले गर्दा मोदीको छिमेक निती समेत बदनाम बन्न पुग्यो ।उता मोदी छिमेक नीतिमा असफल हुदै थिए भने यता नेपालमा चलाख नेता केपी ओली मादीको नाकाबन्धि क्षेप्यात्रलाई गलाएर साच्चै ‘सेलीब्रेटी’ नेता बन्दै गए ।
यसले गर्दा सधै नेपाललाई आफ्नै सुरक्षा छाता भित्र राख्न चाहाने भारतयि चासोमा चीसो पानी पोखीयो । यहि पोखिएको चिसो पानी तताएर न्यानो बनाउने एक मात्र देखावटि उद्देश्य लिएर मोदीले नेपालको भ्रमण गर्न थालेको भन्न सकिन्छ ।
जनकपुरमा सोधिनै पर्छ
धेरैलाई लाग्छ मोदी नेपालको तराइका मीत्र हुन । उनको इसारामा तराई जल्न पनि सक्छ, जम्न पनि सक्छ । तराइका केहि स्वार्थी समुहका कारण कताकता यो सत्य हो जस्तो देखीन्छ । यस भीत्र अत्यतै ठुलो असत्यता पनि भेटिन्छ ।तराई मोदीको मीत्र होइन । मोदीका कारण हाम्रो समथर भुमी र त्यहाँ देशको किल्ला संरक्षण गरेर बसेका जनता सबै भन्दा बढि आक्रान्त छन् ।
रोटी बेटीको नाममा तराइ र तराइबासी नेपालीमाथी मोदीका सीमा सुरक्षा बलले गर्ने गरेका ज्यादतिको तीतो अनुभुती काठमाडौ या जनकपुरमा बसेर गर्न सकिँदैन । नेपाली चेली माथि गरीने अभद्र व्यवहार देख्दा ‘सीता माइ’ समेत भकानीएर रुन्छिन् ।
मोदीले आफ्नो भुमी सुरक्षीत गर्ने नाममा बनाएका बाँध र व्यारेजले असार देखी असोज सम्म डुव्ने पनि नेपालको तराइ भुमीनै हो । सयौ जनको क्षति, अबौँ धनको क्षति बाट पीडीत हुने हाम्रै तराइ हो
बेलुका नेपाली भुमीमा सुतेका तराइ बासी नेपाली भोली वीहान उठ्दा भारतीय भुमीमा परीसकेका हुन्छन् । वर्षेनी लाखौ हेक्टर भुमी मोदीकै मतियारहरुले हडपीरहेका छन् । यस्तो वेला जनकपुरमा नागरीक अभिनन्दन गर्दा जनकपुर बासि, सबै नेपालीले मोदिलाई केहि प्रश्न सोध्नै पर्दछ ।
प्रश्न न. १– जनकपुरको १२ विघाहा जुन ठाउँ असार देखि असोज सम्म जलमग्न हुन्छ, उक्त ठाउँमा उभिएका मोदिलाई हामिले सोध्नै पर्छ– मोदि जी तपाइँले अनाधिकृत रुपमा बनाएका बाँधले डुवेको तराई जोगाउन के ति बाँध भत्काउन र पानिको निकास खुल्ला गरीदिने प्रतिबद्धता जनाउन सक्नु हुन्छ ?
प्रश्न न.२– प्रत्येक दिन मिचिएको सिमाना तिर फर्केर हमिले सोध्नै पर्छ, तराईमा अभिनन्दन लिएर फर्किए पछि तराईको मटिलो भू–भाग नमिच्ने प्रतिबद्धता तपाँईबाट आउँछ ?
यस्तै असमान सन्धि सम्झौता र भारतको नितिमा परीवर्तन आउँछ ? जस्ता प्रश्नको सकारात्मक उत्तर हामिले पायौँ भने मात्रै ओलिको निम्तामा भएको मोदिको भ्रमणको केहि अर्थ रहने छ ।
हाम्रो तराई बाल बिबाहबाट आक्रान्त छ । यहाँका चेलिहरुले बचपना पार नगर्दै बिहेको फेरोमा घुम्न बाध्य छन् । भारतिय पत्रकार पिंकि बनर्जिको भाषामा आफैँ बाल बिबाहको सिकार भएका मोदि जी ले हाम्रो तराईको कुप्रथा बाल बिबाहको नियन्त्रणका लागि पनि केहि बोल्लान् कि !
संभावना नै संभावनाको क्षेत्र कृषि